Misimboti yepamutemo yezvinyorwa zvemashoko yakaoma uye yakaoma kunzwisisa? chero bhuku redzidziso СРЯ, chikamu cheS SYNTAX chemitsara yakaoma yeSSP (makirasi), kuiswa kwemakambani Stavitsa: 1) Pakati pezvikamu zveSSP nekubatana, muvengi nekuparadzanisa ...
nzira yokusiyanisa chiito chakakwana kubva muchiito chisina kukwana Chiito chakakwana chimiro chinopindura mubvunzo: chii chaunofanira kuita, uye chisina kukwana: chii chaunofanira kuita? Zviri nyore nyore! Chimiro chakakwana chechiito chinopindura mubvunzo wekuita, uye ...
Rondedzera mafirimu emutauro muChirungu. Kunyanya zviri nani. MuChirungu neKjk kushandura, unogona kusarudza yako yaunofarira mafirimu. Kune marudzi akadaro ezvirongwa zvemafirimu ...
Seme naShe Chii ichocho? Tsanangura, tapota, pane imwe muenzaniso. A semema, kana semanteme (kubva muchiGiriki ini ndinoshandisa; izwi rinoumbwa nekufananidza nemashoko phoneme, morpheme) inhengo yezvigadziro zvemurimi, ...
Ichokwadi here kuti Sanskrit yakafanana neRussia? Ichokwadi. Asi kune mimwe mitauro yeEurope, yakafanana zvikuru neSanskrit kupfuura Russian. Izvi, somuenzaniso, Gypsy uye Ossetian. Iranian (Farsi) neAghan (Pashto) ...
Підкажіть як відредагувати; mazwi akagashirwa muUkraine mov Nevrno viskuyuyuchiy shit * Secretary secretary Keruyuchy recession to the mawazo kune clemency .....
VaErzyans vanoita sei zvakasiyana kubva kune mokshan? Ko mitauro yakasiyana sei? m b vamwe kuenzanirana kwaVictoria, pano, pasi, pane tafura ine kusiyana kwemashoko: http://www.cigankin.ru/archives/581 Kune imwe huru, Mordov ...
Zita raRamil rinoenderana. Iri zita rechiTatar. Zita raRamil muchiArabhu rinoreva mashura, anoshamisa, anoshamisa. MuArabic, raml zvinoreva kuwanda mujecha, ...
Ungadzidza sei Estonian iwe pachako? Hapana vakadzidzisi vemutauro muguta, asi hatiregi! http://www.eki.ee/books/ekk09/ http://langust.ru/news/16_10_12.shtml http://openlanguage.ru/inform/inslozhnye_jazyki_mira http://www.languages-study.com/ eesti-links.html http://www.eestikeel.ru/ https://sites.google.com/site/eestikeelkool/ Kubudirira! Estonian haisi mutauro wakaoma zvikuru uchienzaniswa ne ...
Mibvunzo ye23 mu database yakagadzirwa mu 1,455 masekondi.